iPhone 13 ရဲ့ Cinematic Mode ဆိုတာ ဘာလဲ? – MyTech Myanmar
iPhone 13 Series ရဲ့ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်တွေထဲက ၁ ခုက Cinematic Mode ဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်တွေ ရိုက်ကူးနိုင်လောက်အောင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီ Cinematic Mode အကြောင်းကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
Cinematic Mode ဆိုတာ ဘာလဲ?
Cinematic Mode ဆိုတာ iPhone 13 Series ဖုန်းအားလုံးမှာ ပါတဲ့ Video ရိုက်ကူးတဲ့ Mode ဖြစ်ပြီး Subject ၁ ခုကနေ တခြား ၁ ခုကို ဉာဏ်ရည်မြင့်စွာ Focus ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ iPhone 13 ဟာ ဖရိမ်ထဲမှာ ရွေ့လျားနေတဲ့ လူကို အာရုံခံနိုင်ပြီး အဲဒီ လူမှာပဲ Focus ကို ထားပေးထားပါတယ်။
iPhone 13 ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ လုပ်ဆောင်ချက် ၁ ခုက ဖရိမ်ထဲကို လူ ၁ ယောက်ဝင်လာရင် အဲဒီလူကို Focus ထားပေးတာပါ။ အဲဒီအတွက် ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင် အများကြီး လွယ်ကူလာပြီး Focus ပျောက်တဲ့ ပြဿနာ မဖြစ်စေပါဘူး။ အကောင်းဆုံးက Video ရိုက်ပြီးနောက်မှာ Focus နဲ့ Bokeh ကို ပြောင်းလဲနိုင်တာပါ။
Cinematic Mode ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ?
နည်းပညာ အပိုင်းက ပြောရရင် Apple က iPhone 13 ဟာ Cinematic Mode မှာ တစ်စက္ကန့်ကို ၃၀ ဖရိမ်နှုန်းနဲ့ အရည်အသွေးမြင့် Depth Data တွေကို ဖမ်းယူပေးနိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဖုန်းဟာ ကင်မရာနဲ့ ဖရိမ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ အမျိုးမျိုးသော Subject တွေအကြားက အကွာအဝေးကို အတိအကျ တွက်ချက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့အတူ Apple Neural Engine ရဲ့ Machine Learning နဲ့ ပေါင်းစပ်ကာ ကင်မရာက Focus ချိန်ညှိတာကို သေသပ်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Algorithm က Focus လုပ်တာကို မယုံကြည်ရင် ကိုယ်တိုင် Subject မှာ Focus ကို Lock လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Professional Gear တွေ မလိုဘဲ အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ Video တွေ ရိုက်ကူးနိုင်မှာပါ။
Cinematic Mode ရဲ့ ကန့်သတ်ချက်
Cinematic Mode ကို iPhone 13 Series အားလုံးမှာပဲ အသုံးပြုနိုင်ပြီး iPhone အဟောင်းတွေမှာ သုံးလို့ မရပါဘူး။ ဒါ့အပြင် 30fps နှုန်းနဲ့ 1080p (Full HD) Video တွေကိုပဲ ရိုက်ကူးနိုင်ပြီး 4K 60fps Video တွေ ရိုက်ကူးလို့ မရပါဘူး။
MyTech Myanmar2021-09-18T18:43:16+06:30September 18th, 2021|Apple, HowTo, Mobile Phones, Tips & Stories|
နောက်နှစ်မှာ Apple AirPods ရောင်းအား ၈၅ သန်းရောက်ရှိနိုင်
Samsung Galaxy S22 Ultra ရဲ့ အနောက်ဘက် ဒီဇိုင်းပေါက်ကြားလာ
မကြာခင်မိတ်ဆက်တော့မဲ့ Sony Xperia သစ်ရဲ့ကင်မရာအကြောင်း Teaser ထွက်လာပြီ